Tag: activation | Martech Zone
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa 5 SaaS
Zoma, Jona 12, 2020 Zoma, Jona 12, 2020 Hardik Oza
Nandeha ny andro niasa mafy ireo ekipa fahombiazan'ny mpanjifa tamin'ny antso tsy voafetra sy ny mpanjifa. Satria izao no fotoana hampihena kely kokoa sy handraisana bebe kokoa amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa. Ny hany ilainao dia ny paikady mahira-tsaina ary angamba ny fanampiana sasany avy amin'ny orinasam-pampandrosoana fampiharana SaaS. Saingy, na eo aza izany, ny rehetra dia tonga amin'ny fahalalana ny fomba fanao mety hahombiazan'ny mpanjifa. Fa aloha, azonao antoka ve fa mahafantatra ilay teny ianao. Andeha isika
Mahazo manokana an'ity tontolo feno olona ity
Alakamisy, Septambra 10, 2015 Alakamisy, Septambra 10, 2015 Venkat Viswanathan
Ao amin'ny sehatry ny fivarotana antsinjarany ankehitriny, ny tolotra manokana dia mampiavaka ny marika amin'ny tolona hisarihana ny sain'ny mpanjifa. Ny orinasa manerana ny indostria dia miezaka ny hanome traikefa manokana an'ny mpanjifa tsy hay hadinoina hananganana tsy fivadihana ary hanatsara ny varotra amin'ny farany - saingy mora kokoa noho ny vita izany. Ny famoronana an'ity karazana traikefa ity dia mitaky fitaovana hianarana momba ny mpanjifanao, hananganana fifandraisana ary hahalala hoe karazana tolotra inona no hahaliana azy ireo, ary rahoviana. Ny zava-dehibe mitovy amin'izany dia ny fahalalana
Pirates Metrics: Analytics azo ampiharina amin'ny famandrihana
Talata, Janoary 22, 2013 Douglas Karr
Miaina amin'ny vanim-potoana mora sy mora kokoa ny famolavolana vahaolana ho anao manokana isika. Ny ankamaroan'ny fitaovana nentim-paharazana amin'ny Internet dia natsangana tamin'ny vanim-potoana hafa - izay tsy nisy akory ny SEO, marketing marketing, media sosialy, ajax, sns. Saingy mbola manohy mampiasa ireo fitaovana izahay, mamela ny fitsidihana, ny fizarana pejy, ny fitsapana ary ny fivoahana manaparitaka ny fanapaha-kevitra tsy fantatsika na misy akony na tsia ny farany. Ny mari-pahaizana izay manadanja indrindra dia tsy